အဆောက်အဦးအပြင်အသုံးပြုမှု LCD မျက်နှာပြင်ဗျူဟာလမ်းညွှန်သတ္တု detector (JT-8000A) China Manufacturer
ဖေါ်ပြချက်:ဂိတ်မှတဆင့်လုံခြုံရေးလမ်းလျှောက်,ခန္ဓာကိုယ် Scanner သတ္တု Detector,ထိပ်တန်း 10 သတ္တု detectors
Home > ထုတ်ကုန်များ > သတ္တု Detector မှတဆင့် Walk > ရေစိုခံသတ္တု Detector > အဆောက်အဦးအပြင်အသုံးပြုမှု LCD မျက်နှာပြင်ဗျူဟာလမ်းညွှန်သတ္တု detector (JT-8000A)
အဆောက်အဦးအပြင်အသုံးပြုမှု LCD မျက်နှာပြင်ဗျူဟာလမ်းညွှန်သတ္တု detector (JT-8000A)
LCD မျက်နှာပြင်နှင့်အတူ 8 ဇုန် - ရေစိုခံလမ်းလျှောက်-မှတဆင့်သတ္တု detector
JT-8000A တရုတ်နှင့်အင်္ဂလိပ်ဘာသာနှစ်မျိုးစစ်ဆင်ရေး panel ကိုအတူဇိမ်ခံသတ္တု detector တံခါးကိုဖြစ်ပါတယ်။6လက်မအရွယ် LCD screen ကိုအင်္ဂလိပ်နှင့်တရုတ်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ဒါဟာ 8-ဇုန်အားလုံးလမ်းညွန်အတွက်ထောက်လှမ်း, တိကျ positioning ကိုနှင့်တည်ငြိမ်စွမ်းဆောင်မှုရှိပါတယ်။ အဆိုပါတင်သွင်း fireproof ဘုတ်အဖွဲ့, fireproof ရေစိုခံ, shockproof နဲ့အလင်းအလေးချိန်၏အားသာချက်များရှိပြီးသောတံခါးကို panel ကပစ္စည်းအဖြစ်အသုံးပြုသည်။ လူ့ခန္ဓာကိုယ်ကဲ့သို့တူညီသောအမြင့်နှင့်အတူ high-Brightness ကို LED နှိုးဆော်သံညွှန်းကိန်းတံခါးကိုနှစ်ဖက်စလုံးပေါ်တွင်ကော်လံပေါ်မှာ install လုပ်ထားကြပါတယ်။ တစ်ခုကလျှပ်စစ်သံလိုက်လယ်ပြင်တံခါးဝ၌တည်တတ်၏။ လူ့ခန္ဓာကိုယ်သတ္တုတ္ထုသယ်ဆောင်သောအခါ, တိကျစွာသတ္တုတ္ထုသို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောအမျိုးမျိုးသောထိန်းချုပ်ကိရိယာများ, လက်နက်များနှင့်သတ္တုအဖြစ်လူတစ်ဦးအပေါ်ဒါမှမဟုတ်လက်အိတ် box ထဲမှာသယ်ဆောင်သတ္တုပါဝင်သောဆောင်းပါးများ, detect နိုင်သည့်နှိုးဆော်သံကိရိယာ generate နိုင်ပါတယ်။ ထုတ်ကုန်များ, အီလက်ထရောနစ်ထုတ်ကုန်များနှင့်သတ္တုပါဝင်တဲ့သည်အခြားဆောင်းပါးများ, etc, လုံခြုံရေးစစ်ဆေးခြင်းနဲ့ anti-ခိုးယူစစ်ဆေးခြင်းများအတွက်ထိရောက်သော tool ကိုဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ဟာအဓိကအား, အစိုးရအေဂျင်စီများ, အများပြည်သူလုံခြုံရေးကိုယ်တွင်းအင်္ဂါ, procuratorates, တရားရုံးများ, အကျဉ်းထောင်, ထိန်းသိမ်းရေးစင်တာများ, အကောက်ခွန်, လေဆိပ်, ဘူတာရုံ, etc အားကစားကွင်း, ပြပွဲနေရာများ, ဖျော်ဖြေရေးနေရာများ, ကြီးမားတဲ့စုဝေးများနှင့်ထိုကဲ့သို့သောဟာ့ဒ်ဝဲကဲ့သို့သောအခြားစက်ရုံများသို့မဟုတ်လုပ်ငန်းများအတွက်အသုံးပြုကြသည် အီလက်ထရွန်းနစ်, လက်ဝတ်ရတနာ, စစ်ရေးနှင့် coinage ။ လေဆိပ်သတ္တု Detector, လေဆိပ်သတ္တု detectors အ။
1. Fireproof ရေစိုခံခြင်းနှင့် shockproof ဒီဇိုင်း: အတင်သွင်း fireproof ဘုတ်အဖွဲ့, fireproof ရေစိုခံ, shockproof နဲ့အလင်းအလေးချိန်၏အားသာချက်များရှိပြီးသောတံခါးကို panel ကပစ္စည်းအဖြစ်အသုံးပြုသည်။ အထူးပြပွဲလေဆိပ်သတ္တု detectors အ။
2. 360o All-ပတ်ပတ်လည်ထောက်လှမ်း: အဲဒီမှာထောက်လှမ်းဇုန်များတွင်အဘယ်သူမျှမကျြစိကနျးဇုန်ဖြစ်ပြီး, ထောက်လှမ်းဇုန်အတွက်တစ်ဦးချင်းစီ point ရဲ့ထောက်လှမ်းတူညီနေမှု LCD ကို display နှင့်ဝေးလံခေါင်သီထိန်းချုပ်မှုစစ်ဆင်ရေးနှင့်အတူသည်ကောင်းလှ၏ ရေစိုခံသတ္တု Detector, ပြင်ပရေစိုခံသတ္တု detector, IP55 ရေစိုခံသတ္တု detector ။
3. Precise positioning ကို: 8 လွတ်လပ်သောဖြန့်ဝေထောက်လှမ်းဒေသများနှင့်6ပေါင်းစပ်ထောက်လှမ်းဒေသများ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပစ်မှတ်တွေ့ရှိသောအခါ, အသံနဲ့အလင်းနှိုးစက်။ နှစ်ဖက်စလုံးတွင်အဆိုပါညွှန်ကိန်းများကိုတိုက်ရိုက်တိကျစွာနေရာချထားခြင်းနှင့်အမြင်အာရုံပစ်မှတ်တငျပွနိုငျသောနှိုးဆော်သံဧရိယာ, ဖော်ပြရန်။ အနေအထား။
4. အာရုံချိန်ညှိဖြစ်ပါသည်: တစ်ဦးချင်းစီထောက်လှမ်းဇုန်၏ sensitivity ကို 0-255 ကနေလွတ်လပ်စွာချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်။
ထောက်လှမ်းသည် Modes ၏ 5. ကြိုတင်ပြင်3မျိုး, တဦးတည်း-button ကို switching:3ကွဲပြားခြားနားသော sensitivity ကိုထောက်လှမ်းတောင်းဆိုမှုကို Modes သာကွဲပြားခြားနားသောအခါသမယသည်နှင့်အညီကြိုတင်နိုင်ပါသည်။ နောက်တဖန်သုံးပြီးတဲ့အခါ, ရုံ sensitivity ကိုအတည်ပြုပေးရန်လိုအပ်ခံရဖို့ Modes သာ၏အုပ်စုတစုကိုရွေးပါ, တဦးတည်း button ကို, အရပျ၌လည်ပတ်ရန်လွယ်ကူမလိုအပ် Multi-သေံဖြစ်ပါတယ်။3ကွဲပြားခြားနားသောနှိုးဆော်သံ volumes ကိုရှိပါတယ်, သင်သည်သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုအညီကွဲပြားခြားနားသောအသံအတိုးအကျယ်ချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်။
6, modular ဒီဇိုင်း: modular ဒီဇိုင်းတပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသော, အမှားဖယ်ရှားပစ်ရန်လွယ်ကူဖြစ်ကြသည်။
7. microprocessor နည်းပညာ: အဆိုပါထိန်းချုပ်မှုကိုပိုမိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သည်။ အားလုံး parameters တွေကိုအမျိုးမျိုးသောအသုံးပြုသူလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ control panel ထဲကမှတဆင့်အစီအစဉ်နှင့် preset နိုင်ပါသည်။
8, ပေါင်းစပ် circuit ကိုဒီဇိုင်း, အနီအောက်ရောင်ခြည်စက်ကို, ကွန်ပျူတာအလိုအလျှောက်မှတ်ပုံတင်, ထိထိရောက်ရောက်မမှန်သောလက္ခဏာနှင့်မှားယွင်းသောဆိုးကျိုးကိုလျှော့ချနိုင်ပြီး, အလိုအလျှောက်နိုးစက်၏နံပါတ်, ဖြတ်သန်းလူများ၏အရေအတွက်ကိုရေတွက်လို့ရပါတယ်။
9. ဒါဟာအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ Anti-လျှပ်စစ်သံလိုက််ရောက်စွက်ဖက်စွမ်းဆောင်နိုင်မှုနှင့်ခိုင်ခံ့သော Anti-တိုက်မှုစွမ်းရည်ရှိပါတယ်, နှင့်လူစည်ကားအခြေအနေများအောက်တွင်ပုံမှန်လည်ပတ်နိုင်သည့်ဒီဂျစ်တယ် filtering ကိုစနစ်, processing DSP signal ကိုရှိပါတယ်။
10, စဉ်ဆက်မပြတ်အလုပ်စွမ်းဆောင်မှုနှင့်အတူပြုလုပ်သည့်အချိန်တွင်မဆိုထောက်လှမ်းမှလွတ်မြောက်ရန်မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ဒါဟာအလိုအလျောက်တပ်ဆင် site ကိုရွေးချယ်ဖို့ကူညီပေးသည်ရာပတျဝနျးကငျြပတ်ဝန်းကျင်၏ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ကိုတိုင်းနှင့်ပြသနိုင်ပါတယ်။
11. Password ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဆက်တင်: password ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်တဲ့ function နှင့်အတူ parameters များကိုသာမှန်ကန်သော password ကို inputting ပြုပြင်နိုင်ပါသည်။ non-အော်ပရေတာလွယ်ကူပါတယ်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်လုံခြုံရေးတံခါးကို parameter သည် settings တွေကိုမပြောင်းနိုင်ပါ။
အားနည်းသံလိုက်စက်ကွင်းကိုထုတ်လွှတ်နည်းပညာကို အသုံးပြု. လက်ရှိနိုင်ငံတကာဘေးကင်းလုံခြုံမှုစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီခုနှစ်တွင် 12 သည်, pacemaker, ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများ, software များ, ဗီဒီယိုတိပ်ခွေ, etc ရန်မပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုလည်းမရှိ
60 ကျော်ကလူ / မိနစ်: 2, ပုဂ္ဂိုလ်များနှုန်းကိုဖြတ်သန်းရတယ်။
5, အလုပ်လုပ်ပတ်ဝန်းကျင်: -10 ° C မှ ~ 55 ° C မှ 95% RH အ≤။
အပိုင်း III ကို။ ကို standard configuration
Computer ကိုဦးခေါင်းလိုင်း:2screw နှစ်ခု: ရှစ်အစုံ
အပိုင်း IV ။ သငျသညျယ်ယူနိုင်သည်ကိုဆက်စပ်ပစ္စည်း
3. Handheld လုံခြုံရေး detectors အစနှိုးဆော်သံ၏တည်နေရာနောက်ထပ်လက်-ကျင်းပသတ္တု detectors အနေဖြင့် check လုပ်ထားနိုင်ပြီးပုဂ္ဂိုလ်များ၏အမြန်နှုန်းကိုတိုးပွားစေခြင်းနှင့်အလုပ်ထိရောက်မှုနှင့်ကြီးကြပ်မှုတိုးတက်ရာ။
ဂိတ်မှတဆင့်လုံခြုံရေးလမ်းလျှောက် ခန္ဓာကိုယ် Scanner သတ္တု Detector ထိပ်တန်း 10 သတ္တု detectors သတ္တု Detector မှတဆင့်လုံခြုံရေးလမ်းလျှောက် သတ္တု Detector မှတဆင့်စီးပွားရေးလမ်းလျှောက် သတ္တု Detector မှတဆင့်လေဆိပ်အထူးလမ်းလျှောက် သတ္တု Detector မှတဆင့်တံခါးကိုလုံခြုံရေးလမ်းလျှောက် ဂိတ်မှတဆင့် Ceia လမ်းလျှောက်